Olona sahirana sy tsy mianan-kialofana Hisitraka trondron-dranomasina telo taonina
Trondron-dranomasina telo taonina no natolotry ny orinasa SOPROMER izay ao anatin` ny vondrona « Refrigépêche » ho an` ireo olona sahirana sy tsy manan-kialofana izay sahanin` ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Mandritra ny roa volana dia 200 kilao isaky ny herinandro aterin` ny orinasa eny amin` ireo ivon-toerana natokana amin` izany. Nisitraka taratasim-bola (chèque) ihany koa ny CUA ka ny ben` ny tanàna Naina Andriantsitohaina no nandray izany. “Faly ny orinasa “sopromer” manohana ireo olona sahirana amin` izao vanim-potoana sarotra hiatrehana valanaretina toy izao. Tsy maintsy misy ny firaisan-kina” hoy Eric Douheret, filoh tale jeneralin`ny vondrona.